Global Voices teny Malagasy » Adihevitra Saodiana Momba ny Fefy Atsangana Manaraka amin’ny Sisintany 1000 Maily Ifanakalozana amin’i Yemen · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2013 18:47 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Yemen, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nitatitra ny BBC fa eo am-pananganana fefy 1000 maily  amin'ny sisintany ifanakalozany amin'i Yemen i Arabia Saodita. Zara fa lazaina ao amin'ny gazety nasionaly Saodiana io vaovao io raha miely sy voatsikera fatratra any amin'ny gazety Yemenita.
Niadian-kevitra fatratra ny fivelarany tao amin'ny tontolon'ny Twitter Saodiana. Ny mpanohana milaza ny tsy maintsy hanaovana izany ho fiarovana ny fitondram-panjaka raha milaza io ho fanerena mafimafy kokoa ny fahirano atao amin'ny vahoaka Yemenita ny mpanohitra.
Ny Fefy manaraka ny sisintany ifanoloran'i Etazonia sy Meksika no ohatra iray noraisin'ny mpanohana. Hoy ny siokan'i Fahad al-Rsheed [ar]:
@fahadccx : Zon'ny firenena tsirairay ny miaro tena amin'ny fanondranan'ny jiolahy rongony sy fitaovam-piadiana. I Amerika, ohatra, nanangana fefy amin'ny sisintany ifanolorany amin'i Meksika.
Etsy ankilany, milaza ny mpanohitra sasany fa tokony holaniana amin'ny zavatra tsara kokoa ny vola. Nisioka ny mpisolovava sady mpikatroka Abdullah al-Nasri:
@alnasri1 : Amin'io fandaniana io, afa-nampiasa ny any amin'ny faritra Atsimo [Saodiana] isika hiambina ny sisintany, ary afa-manampy tetikasam-pampandrosoana any Yemen hanamafisana ny firahalahiana.
Ny Hafa mampisongadina ny firaisankina ao amin'ny firenena Arabo. Nisioka i Abu Faisal:
@Abuufaisal_1 : Hiafara toy ny Rindrin'i Berlin ihany io. Tsarovy izay!
Ny hafa manana fomba fijery mahaolona:
@Mnor_ : Amin'ny fanaovana an'io isika dia mandao ny sisa ambin'ny mahaolombelona antsika.
@__Husam__ : izao no ohatry ny fisainana polisy miatrika lohahevitra miteraka fiantraikany ara-piarahamonina sy ara-toekarena. Mba manana fisainana tsy polisy ve isika?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/24/48043/
 eo am-pananganana fefy 1000 maily: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22086938